တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မြန်မာဘလော့ခ်များ၏ အနာဂတ် နှင့် လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်
Posted by မေဓာဝီ at 4:54 AM
မမေဓာရေ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဘဲ။ ကျွန်တော်ဆို စိတ်မပြတ်တော့ ရေးမိလိုက်၊ များသွားရင် ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့တစ်ယောက်ထဲကို အလုပ်ရှုပ်နေတော့တာဘဲ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လဲ ငါတို့ ဒီလို တွန့်တွန့် တွန့်တွန့် လုပ်နေလို့ဇာတ်ကြောင်း ရှည်နေတာဘဲ လို့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ငဲ့စရာတွေက များလွန်းတယ်ဗျာ။
မမေရေးတာတွေဟာ အမှန်တွေပဲ မမေ။
မမေရဲ့အရေးအသား၊ အတွေးကောင်းတွေကြောင့် စနေ
တရက်ကို ၃.၄ ခါလောက် လာလာကြည့်ဖြစ်တယ်။
စပရိန်လိုပေါ့...လူတွေဟာ ဖိဖန်များရင် ပိုတွန်းကန်တတ်
တယ်ဆိုတာကို သူတို့မေ့နေကြတယ် ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့်
အသစ်အဆန်းဆိုရင် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ရမှ ကျေနပ်
တတ်တဲ့ အခုခေတ် လူငယ်တွေပေါ့။ မလုပ်နဲ့၊ မသွားနဲ့ ဆိုမှ ပိုလုပ်
ချင်ကြတယ်။ စနေရေးဖူးတဲ့ ပဲပင်ပေါက်လို့ပေါ့။ လေးတဲ့အရာနဲ့ ဖိခံ
ရတဲ့ အပင်ဟာ ပိုသန်တယ်ဆိုတာ။
ဆက်တွေးပါ...ဆက်ရေးပါမမေ။ လူတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အတွေး
တွေကို မျှဝေပါလို့။ ကျေးဇူး။
Yes, you are right. please keep going. I like most of your posts.
Ya.. you are absolutely right.
Freedom to speak , freedom to inspire, freedom to write......
These are the basic essence of progress.I guess, without these how can we upgrade ourselves.
As saying goes " ideas move the world" .
11/09/2006 4:10 PM
ကွန်မန့်ရေးမယ်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အပေါ်က မိတ်ဆွေတွေက ပြောပြီးနှင့်နေပြီ.. ချီးမွမ်းစရာ စကားတောင် ရှာမတွေ့တော့ဘူး.. ကဲ.. ပြစ်မှုကို ပျော်ပျော်ကြီး ကျူးလွန်ကြတာပေါ့ဗျာ.. ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ကျနော်တို့က အပြင်ကလူတွေ.. အထဲကလူတွေက ပိုစိတ်ညစ်ကြရမှာ.. ဟိုပိတ် ဒီပိတ်..
မမေပြောသလိုဘဲပေါ့။ ဘလောဂ် ဆိုတဲ့ဟာကို ဒါကြောင့်လူတွေကြိုက်ကြတာ။ ကောင်းမှ….ကောင်း……..
မမေ ရေ အားလုံး မှန်နေတယ်
မမေ ရေ ဒီမှာရေးချင်းလို့ တင်နေတာ ကော်နက်စုပ်ကကောင်းကိုမကောင်းဘူး
11/10/2006 4:37 AM
အခွင့်အရေးပေးပါလျက်နဲ့ မရေးရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်ဖို့ပဲရှိတယ်။
အာချောင်တယ်ပဲဆိုဆို ကျနော်ကတော့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတွေးတွေထုတ်မရေးရင် အစာမကြေဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပိုကောင်းသွားဖို့ရာ ဘလော့မှာပေါက်ကွဲနေခြင်းထက် ပိုပြီးထိရောက်တဲ့၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ဂုတ်ပေါ်ခွစီးခံနေရတာကိုက လူဖြစ်ရှူံးနေပြီ၊ ဒါကိုမှဂုတ်ပေါ်က မိစ္ဆာကိုပြန်ဆဲခွင့်တောင် မရှိရင်တိရစ္ဆာန်တကောင်ထက် ဘာများထူးသေးလဲ။
11/11/2006 9:52 AM
ပိတ်တော့လဘြာစြေ်လြ။ တနည်းမဟုတ်တန်ညးနဲ့ ရေးမှပေါ့။ လွတ်လပ်တြ့ နည်းလမ်းတွေ တတ်နိုငတဲ့သူတွေက ၀ိုင်းကူရမှာပေါ့။